TRATRIN’NY FARANY EEE – The Cyber Observer
TRATRIN’NY FARANY EEE
dadandry	Uncategorized	 December 31, 2009 1 Minute
Samy tratrin’ny farany daholo intsika eee !!! Izay foana no henoko androany efa nanomboka tamin’ny dimy ora maraina (ora ifohazako). Samy faly daholo ra-Malagasy efa miala aina ny taona 2009 … Iza tokoa moa no halahelo an’io taona io? Ny taona 2009 amiko aloha dia mendrika antsoina hoe “taonan’ny henatra” satria tsisy n’inoninona vanona fa fanapotehana sy korontana no nasetry. Taona izay niheverin’ny sasany botry saina fa taonan’ny “fanantenana” nefa toa lasa taonan’ny “fanaintainana”.
Tadidiko laotra ny lalana efa naleha tamin’ny taona 2007 sy 2008 ka noheveriko hoe 2009 izany no taona hijinjana ny vokatra … tssss … “gaga eo ialahy” hoy ilay namako izay. Ireo sombin’asa kely mba efa vita tamin’ny 2007 sy 2008 toa lasa lavenona sisa ankehitriny satria nisy an’ilay ben’ny tanàna iray izay naniry mafy ny ho mba lasa filohan’ny repoblika.
Dia ahoana fotsiny izany? Inona moa no ambara? Io izy io! Eo ampamaranana ny taona 2009 dia POTIKA TANTERAKA ny toe-karena. Ny AGOA tsy hisy intsony amin’ny 2010. Maro dia maro ireo orinasa nikatona sy nandroaka mpiasa. Tapaka ny fanampiana ara-bola avy any amin’ny Eropeanina (FED) sy ny FMI (FRPC) ka mety tsy ho voaloha intsony ny karaman’ny mpiasa-panjakana (ny miaramila ao anatiny ;-)). Ny ankabeazan’ny orinasa Malagasy dia tsy mahaloa hetra intsony.
MIKORONTANA ny ara-tsosialy. Lasa mitobaka eran’ny tanàna ny mpivarotra (izay ireo tsy an’asa ihany) ka mitarika tsy filaminana. Ny vaky trano sy ny fanendahana lasa nirongatra.
Ny Miaramila, Zandary sy Pôlisy dia minia jamba, marenina sy maona satria hono “tandroka aro ny vozona”. Ireo namany mba masaky miteny tonga dia mahazo kobay …
TSY MILAMINA NY FIRENENA MALAGASY – VERY NY FIRENENA MALAGASY. Izany no firenena lovaintsika amin’ny taona 2010 …
Previous Post CMA – CGM Madagascar and rosewood trafficking
Next Post Daily rallies of the opposition have moved to Anosikely
2 thoughts on “TRATRIN’NY FARANY EEE”
Pingback: Tweets that mention TRATRIN’NY FARANY EEE « The Cyber Observer -- Topsy.com
Maloka be izany fijerin’ialahy izany ah. Mafy ny fiainana fa na dia izany aza tsy maintsy atraka ny loha 🙂